Sergio Aguero oo Taariikh Cusub ku soo kordhiyey Premier League+Sawiro | Ciyaarside.com
Sergio Aguero oo Taariikh Cusub ku soo kordhiyey Premier League+Sawiro
Feb 11, 2018 - Aragtiyood
Kooxda Kubada Cagta Manchester City ayaa Guul Xoog badan ka Gaartay Naadiga Leicester City kadib markii ay ku Faraaceen 5-1 Waana Guushii 23 aad 27 Cayaarood oo ay dheeleen Xiligaan sidoo kale waa Guushii 13 aad ee ay ku Gaaraan Garoonkooda.
Weeraryahanka dalka Argentina ee Sergio Aguero oo 4 Gool kaligii u dhaliyey Manchester City ayaa Taariikh Cusub ku soo kordhiyey Horyaalka Premier League dalka England kadib markii uu Noqdey Cayaaryaahnka kaliya ee 3 Cayaarood oo kala duwan dhaliya min 4 Gool mana jiro Xiddig sidaas oo kale sameeyey Taariikhada Horyaalka Premier League.
Sergio Aguero ayaa sidoo kale Noqdey Cayaaryahankii 4 aad ee Afar xili Cayaareed oo Xiriir ah ka dhaliya Horyaalka Premier League 20 Gool iyo ka badan waxaana sidaas oo kale sameeyey Weeraryahanada fter Alan Shearer, Thierry Henry iyo Harry Kane.
Aguero ayaa sidoo kale 7 kulan oo Xiriir ah waxa uu Goolal ku dhaliyey Xiligaan Garoonka Etihad Stadium isaga oo dhaliyey dhamaan Tartamada 14 Gool waana markiisii ugu dheereyd ee uu Kulamo xiriir ah Goolal ku dhaliyo Garoonka kooxdiisa Manchester City.
Manchester City ayaa qarka u saaran in ay Ku Guuleysato Horyaalka Premier League waxaana ay hada Hogaanka ku haysaa 16 dhibcood oo Nadiif ah sanadkaana waxaa lagu Tilmaamay in uu yahay keedii oo aysan jirin cid kula tartami karaysa.